Raha manaraka ny fironan'ny lamaody ianao, dia tsikaritrao fa ny tsena Aziatika dia manana fiantraikany goavana amin'ny fomba maoderin'ny ankizivavy sy ny vehivavy.
Ny fomba fitafin'ny vehivavy Koreana
Ny akanjo Koreana dia miavaka amin'ny fomba mahazatra, ny fampiharana, ny fampiononana ary ny vidiny ambany. Ny kolontsaina atsinanana dia manankarena sy samihafa, ka mahaliana sy tsy ampoizina ny zavatra. Na eo aza ny vidin'ny fitafiana, mbola avo ny kalita. Ny vatosoa dia tsy mety amin'ny fironana na ny fanakanana, ary mahafinaritra ny manohina.
Ny akanjo amidy Koreana dia mora mianatra - akanjom-behivavy, satroka mareva-doko, satroka lava, pataloha marevaka sy shorts. Mpamorona Koreana izay nampahafantatra ny lamaody tamin'ny T-shirts sy ny tampony nampiseho karazan-tsindrim-peo, saribakoloka sy sary miaraka amin'ny anime.
Ny akanjo amin'ny fomba ofisialy Koreana dia tsy mitovy amin'ny lamaody Eoropeana. Tamin'ny taona 2013, ireo mpanamboatra lamaody Koreana dia manolotra akanjo maingo mitaingina lacy, voaravaka amin'ny akanjo amam-bozaka na kiraro, ary koa akanjo amin'ny voninkazo maitso mamiratra.
Fomba amam-panao Koreana
Ny vehivavy Koreana dia samy hafa amin'ny vehivavy Eoropeana satria fantatr'izy ireo ny fomba hampifangaroan-tena. Faly ny lokon'ny loko. Ohatra, ny fanao amin'ny Korean Koreana dia afaka manao akanjom-boninahitra mavokely, akanjo maitso, T-shirt miaraka amin'i Mickey Mouse sy sandals manga eo amin'ny fehiloha avo. Ary inoako fa tsy ho gaga mihitsy ny mpandalo, fa ny mifanohitra amin'izany - mankasitraka! Ny fanaovana akanjo kely amin'ny ririnina dia tsy dia mahagaga loatra, fa ny mifanohitra amin'izany. Vehivavy koreana kely, matevina miaraka amin'ny tratra kely, ka aleony mividy kiraro amin'ny kiraro avo na sehatra. Ny famolavolana amin'ny fomba ofisialy koreana dia hafa manjelatra sy mamirapiratra. Ny Koreana dia mila mampiasa alokaloka sy masika maro mba hampiroboroboan'ny maso kely.
Amin'ny inona ny manao jak'ondry ao anaty tranom-borona?
Amin'ny inona no tokony hanaovana kapa fotsy?
Sary famoaham-boky Fairy-tale
Ahoana no hisafidianana akanjo amin'ny endrika karazana?
Fangatahana ny akanjo
Aiza ny rantsan-tanana manao peratra?
Fivarotana akanjo - sary lamaody amin'ny akanjo fitafy
Kiraro mivelatra - inona no tokony hatao?
Fitafiana ho an'ny vehivavy
Shakira dia manafoitra ny fampisehoana noho ny fananana vohoka fahatelo?
Fanomezana ho an'ny namana ho an'ny Taombaovao
Pistachio loko fotsy
Ny vato ao amin'ny ureter - soritr'aretina
Volon'ny volo eo amin'ny voaly
Hysteritis ao amin'ny tavoahangan'ny Fallopian
Ao amin'ny fonon'ny Vogue sambany vao nisy zaza nateraky ny Down syndrome
Avy amin'ny zazakely mba ho mpampakatra: 40 sarin'i Prince Harry, izay tsy hijery anao intsony!
Ny pataloha manga ny vehivavy
Ahoana ny famerenana ny mikroflora amin'ny tsinay rehefa avy mitondra antibiotika?
Niala tsiny i Lewis Hamilton noho ny fanaratsiana ny zanak'anabaviny nanao akanjo lava
Fanomezana ho an'ny taona vaovao ho an'i Neny
Parrot Parrot - fikarakarana sy votoaty, torohevitra mahasoa
Tile ao amin'ny style of Provence